Ciidanka oo soo bandhigey meydka sadex argagixiso magaalada Samareeb - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ciidanka xooga dalka ee magaalada Samareeb ayaa soo bandhigey meydka laba argagixiso oo hoobiye ku weeraray madaxda qaranka ee jooga Samareeb. Meydka ayaa saaka la soo bandhigey markii lagu guulaystey in la dilo waxyar kadib markii ay soo tuureen hoobiyaha.
Hoobiyeyaasha la soo tuurtey ayaa qaarkood xalay ku dhacay garoonka magaalada Samareeb laakiin nasiib wanaag isla markiiba waxa loogu tagey halka ay ka soo tuureen maadaama magaaladu Muqdisho ahayn oo la wada arkayo cidhif ilaa cidhif.
”Ma baxsan markay soo tuureenba waanu ogaanay waanan dilney sadex ka mida halka mid afraad aan dhaawac ahaan ku qabanay ayuu yiri afhayeen u hadlay ciidanka.
Waxa sidoo kale hawlgalka lagu qabtey qoryo iyo miinooyin ay rabeeninay aaseen xilli amaanka magaaladu aad u adagtahay. Samareenb ayaa waxa ka furmaya kulanka maamul jufeedyada iyo dawlada dhexe, waxana si ula kaca u soo daahay labada horjeege ee kooxda beesha caalamku wadato ee Axmed Madoobe iyo Siciid Deni.